Mar dambe ma iibsan kartid 4GB 21,5TB 512-inch 1k iMac | Waxaan ka socdaa mac
Kama iibsan kartid 4GB 21,5TB 512-inch 1k iMac mar dambe
Horaantii bishaan Xanta qaar waxay tilmaameen in Apple laga yaabo inay joojisay sameynta noocyo 4k iMac ah. Gaar ahaan 21,5-inji oo leh awoodo ah 512 Gb iyo 1 TB. Maanta xantaasi waa run oo ma awoodi doontid inaad ku iibsato moodooyinkaas Webka. Isla wixii ku dhacay Mac Pro, waa la joojiyey oo Waxaad iibsan kartaa oo keliya moodooyinkaas ku haray dukaamada iyo dukaamada tafaariiqda-saddexaad. Laakiin waa inaad ogaataa in Apple uusan sii iibinaynin Webka.
Apple wuxuu yareeyay tirada xulashooyinka keydinta ee loo heli karo 4-inch 21,5k iMac, oo leh ka saarida 512GB iyo 1TB fursadaha kaydinta flash taas oo soo jeedinaysa inaan ka hadli karno isbeddelada suurtagalka ah ee kumbuyuutarkan moodeelkiisa ah. Xanta ku saabsan bilowga bisha ayaa la dhammaystiray, markii ilaha ay ku doodeen in Apple ay joojin kari lahayd soo saarista qaabkan iMac ee leh awooddan kaydinta.
websaydhka Apple Dukaanku wuxuu muujinayaa oo keliya 256GB SSD iyo 1TB ikhtiyaarrada laakiin ku jira nooca Drive fusion. Ogaaday MacRumors, ma jiro wax ikhtiyaar ah oo lagu xusho 512GB SSD ama 1TB SSD oo ku yaal bogga, habeynno horay loo heli jiray. Fursadaha kale, sida processor-ka, GPU, iyo casriyaynta xusuusta, wali waa la heli karaa, ugu yaraan hadda.
Isbeddeladani waxay sameynayaan warar xan ah oo sheegaya in shirkaddu ay isku diyaarineyso inay sii deyso iMac casriyeysan oo lala socdo Apple Silicon. Iyada oo labadaba la soo celinayo qaababkan 4K iMac iyo dib u soo celinta buuxi iMac Pro, Waxay soo jeedinayaan in wax cusubi ay ku soo fool leeyihiin. Ma garanayno haddii dib loogu noqdo labadan moodal ee 4k iMac ah inay noqon doonaan bilowga dhammaadka dhammaan qaabaynta suurtagalka ah, laakiin ma noqon doonto wax lala yaabo maxaa yeelay Apple waxay dooneysaa in dhammaan Macskeedu noqdo Apple Silicon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kama iibsan kartid 4GB 21,5TB 512-inch 1k iMac mar dambe
Badmareenka Vivaldi wuxuu sidoo kale fuulayaa tareenka xawaaraha sare leh ee Apple Silicon